Gbasara Anyị - Nanchang Hot Fashion Co., Ltd.
Uwe elu na elu
Uwe elu uwe
Egwuregwu Bọọlụ Nkata
Fitness Ogologo ọkpa
Uwe akwa ahụ
Pants & nịịka
Hot Fashion Co., Ltd. nke e guzobere n'afọ 2003 bụ ụlọ ọrụ dị iche iche nke na-ejikọta imewe, mmepe na nrụpụta n'ime mbupụ na ọrụ e-commerce. Companylọ ọrụ ahụ dị na Nanchang City, Jiangxi Province, China nwere nnukwu njikọ njikọ njem. O nwere 8250 square mita nke oge a na-emepụta ihe na ndị ọrụ 300.
Hot Fashion maara nke ọma na egwuregwu egwuregwu n'ọhịa na China. Ma ugbu a, ngwaahịa ya emeela ka ahịa ahụ guzosie ike na United States of America, United Kingdom, Japan, Brazil na European Union.
Ngwaahịa ya na-ekpuchi uwe elu T, polos, sweatshirts hooded, basketball na bọọlụ / jọọsụ football. Ka ọ dị ugbu a, Hot Fashion nwere ndị nkesa 60 gburugburu ụwa ma na-ere ngwaahịa ya na ntanetị ntanetị ma ụlọ ma na mba ofesi.
Hot Fashion nwere ike inye OEM na ODM logos na ihe nakawa etu esi n'ụzọ dị iche iche dị ka kpo oku kpo oku, ihuenyo obibi, sublimation obibi, embroidery, 3D-ebi akwụkwọ na ndị ọzọ.
Hot Fashion nwere a mbara Design na a Production na Printing Department ike nweta nlele n'ime 5 ụbọchị na uka mmepụta n'ime 15 ụbọchị.
Hot Fashion nwere raara onwe ha nye mgbe-ire otu na-elekọta ndị ahịa ya.
Uwe ejiji na-ekpo ọkụ emeela ka ndị ahịa ya tụkwasị obi na Europe, North America, South America, Africa na Asia maka mma ya, ụdị ya na ịrụ ọrụ magburu onwe ya.
N'ebe a na ejiji na-ekpo ọkụ, anyị, otu ndị nwere ịnụ ọkụ n'obi, nwere mmasị na ihe anyị na-eme. Anyị na-achọsi ike ma raara onwe anyị nye itinye akara ụkwụ anyị n'oge a nke ịzụ ahịa n'ịntanetị wee nweta mkpuchi ahịa zuru oke karị n'ụwa niile. Anyị maara nke ọma ụzọ iji ruo ihe mgbaru ọsọ a ga-abụ ndị ahịa ma anyị mezuo nke a site na ngwaahịa anyị dị elu na nnukwu ọrụ ndị ahịa. Anyị nabatara nkà na ụzụ nke oge a, ọzụzụ ndị ọrụ na nzukọ mgbe niile na ndị ọrụ ibe anyị ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ ka anyị na-ebute ụzọ nke ihe ọhụrụ ma na-echekwa ụdị ejiji anyị.
Anyị na-anabata ajụjụ sitere n'akụkụ ụwa niile, enweghị iwu pere mpe na enweghị iwu buru oke ibu.
Hot Fashion Co., Ltd. nke e guzobere n'afọ 2003 bụ ụlọ ọrụ dị iche iche nke na-ejikọta imewe, mmepe na nrụpụta n'ime mbupụ na ọrụ e-commerce. Companylọ ọrụ ahụ dị na Nanchang City, Jiangxi Province, China nwere nnukwu njikọ njikọ njem. O nwere 8250 square mita nke oge a na-emepụta ihe na ndị ọrụ 300. Hot Fashion maara nke ọma na egwuregwu egwuregwu n'ọhịa na China. Ma ugbu a, ngwaahịa ya emeela ka ahịa ahụ guzosie ike na United States of America, United Kingdom, Japan, Brazil na European Union.
Hot Ejiji Co.Ltd. guzobere n'afọ 2003, nke bụ ụlọ ọrụ dị iche iche na-ejikọ imewe, mmepe, mmepụta, azụmaahịa mbupụ, azụmahịa na arụmọrụ. Companylọ ọrụ dị na Nanchang City nwere njem dị mfe. O nwere 8250 square mita nke oge a na-emepụta ihe na ndị ọrụ 300.